UPDATE: Duqeyn dhanka cirka ah oo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Duqeyn dhanka cirka ah oo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab
UPDATE: Duqeyn dhanka cirka ah oo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay duqeyn dhanka cirka ah in lagu dilay laba xubnood oo ka tirsan Maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab, kadib duqeyn ka dhacday nawaaxiga deegaanka Kuunya-Barow ee Gobolka Shabellaha hoose.
Wararka ayaa sheegaya, in duqeyntan ay si wadajir u fuliyeen Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya iyo Ciidanka Mareykanka ee caawiya Soomaaliya.
War-Saxaafadeed kasoo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkaas qeyb ka ahaa qorshe Dowladda Federaalka Soomaaliya, Midowga Afrika iyo isbahaysiga caalamiga ee sii wadidda dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
“Dowladda Federaalka iyo bahwadaageeda Mareynkanka ayaa si aad uga taxadara ilaalinta waxyeello soo gaara dadka rayidka ah inta lagu gudajiro duqeymaha habeysan, Hubintii la sammeeyey ayaa lagu ogaaday in duqeynta imanka dhacday aysan jirin cid shacab ah oo ku dhimatay ama ku ku dhaawacantay‘‘ ayaa lagu yiri warka kasoo baxay dowladda.
Ugu dambeyn, Mareykanka oo kaashanaya Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa horay dhowr jeer waxa ay duqeymo dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaano ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana duqeynmaha qaarkood ku waxyeeloobay dad rayid ah.